पार्किंग स्लट मा कार्यक्रम देश
ली Davy pores माध्यम साप्ताहिक समाचार कथाहरू सहित मुकुल Pahuja र माइक कब्र रहनेबारे जोडदार माथि एक सानो सी र सी, र यो धर्म पिता को पोकर भएको हटाउन सर्जरी एक melanoma र त्यसपछि फिर्ता टेबल एक हप्ता भित्र.कहिलेकाहीं यो लेखन स्तम्भ खाने जस्तै सूप संग चपस्टिक, तर यो हप्ता म मिल्यो एक ठूलो spoon.हामी संग शुरू को reigning विश्व पोकर भ्रमण (WPT) Player of the Year, मुकुल Pahuja.कुरा एक मानिस एक टियर मा.फ्लोरिडा देशी बनाएको थियो ट्रेक गर्न मेरील्याण्ड मा खेल्न गर्न राज्य को पहिलो विश्व शृंखला पोकर को क्षेत्रीय (WSOPC), जब उहाँले ट्विटर गर्न लगे गर्न शेयर चार पृष्ठ iPhone नोट खाता को सबै कुराहरू pissing उहाँलाई बन्द । यो देखिन्छ कि स्पार्क ignited Pahuja पेट्रोल बम आए को आयोजकहरु देखि WSOPC बाल्टीमोर मुख्य घटना छ । तिनीहरूले गरे बरु crass दृष्टिकोण विज्ञापन को एक $1 ग्यारेन्टी पछि, पुरस्कार पूल थियो topped $960,000 पार्किंग स्लट मा कार्यक्रम देश.
"यो सरासर बेवास्ता लागि हाम्रो सामूहिक बुद्धि छ सीधा माथि nauseating." Tweeted Pahuja.फिल Hellmuth मा खेल थियो यो घटना । उहाँले दृश्य को फरक बिन्दु पार्किंग स्लट वा पार्किंग. "यो प्रेम!" Tweeted Hellmuth.र उहाँले गर्नुभयो । उहाँले पनि पूंजीकृत छ । यसैबीच Pahuja व्यस्त थियो figuring बाहिर एक तरिका यो समस्या सुलझाने को.आफ्नो समाधान थियो भन्ने सुझाव कसैलाई सिर्जना एक खेलाडी गरेको परिषद । दुई कुराहरू थिए त्यो प्रहार मलाई यस बारेमा सुझाव. I didn ' t read कहीं जहाँ Pahuja लिन जाँदै थियो, जिम्मेवारी र केहि मुद्दा बारे उहाँले बारेमा complaining थियो, म । ई । फारम एक खेलाडी गरेको परिषद । र भने Pahuja चाहँदैन baton, उहाँले पक्कै पनि गर्न चाहँदैन को हातमा पर्नु Hellmuth पछि उहाँलाई कल एक cheeseburger बिक्रि गर्ने व्यक्ति । Hellmuth गरे यो मा आफ्नो प्रगति हुनत.सम्झाएर Pahuja राष्ट्रिय जोखिम को Carls Jr विज्ञापन थियो एक राम्रो कुरा को लागि पोकर पार्किंग स्लट मा दुबई मल.
Pahuja पनि थियो poke मा प्रतियोगिताको आयोजकहरु भन्दै थिए राख्दै आफ्नो तल लाइन अघि ग्राहक मूल्य.एक राम्रो बिन्दु राम्रो गरे, उहाँले अघि, पानी संग तल विवादित टिप्पणी: "हामी एक सही छ हाम्रो तल लाइन पहिलो।" यो देखिन्छ सबैलाई पोकर मा मात्र चासो छ, यो तल लाइन छ । त्यो बाहेक साना बाउन्ने प्राणी Luckychewy को पाठ्यक्रम.माइक कब्र Outs को WSOP यो थिएन मात्र Pahuja थियो जो एक विरोधाभासपूर्ण पिस्नु गर्न axe यो हप्ता । माइक कब्र सबैभन्दा राम्रो तरिकाले आदर मा मान्छे को समुदाय । जब पोकर हल Famer को बोल्छ, मान्छे सुन्न । र तिनीहरूले गर्नुपर्छ । आफ्नो ब्लग पोस्ट केही र कहीं बीच छन्, तर जब उहाँले lets rips, यो आनन्द छ । यो हप्ता उहाँले जिस्कायो को विश्व शृंखला पोकर (WSOP) स्लट जम्मा pulsa न्यूनतम 10000. "तिनीहरूले गर्न प्रयास बलियो बनाउन आफ्नो तल लाइन छ, तर मा त गरिरहेका छन्, diluting आफ्नो उत्पादन हो।" कब्र लेखे बताइरहेका को मात्रा WSOP घटनाहरू, र निर्णय सिर्जना गर्न Nov नौ । कब्र भएको छ नेतृत्व commentator लागि WPT लागि विगत 13-मौसम । एक भ्रमण सुरु भएको 11 घटनाहरू, नौ को थिए जो मा आधारित अमेरिकी माटो, एक घटना मा कोस्टा रिका, र गर्न एक यात्रा पेरिस, र छ देखि मा फर्केर एक वैश्विक राक्षस संग घटनाहरू all over the world.त्यसैले के गरेको दुई बीच फरक?छ को वृद्धि WPT पतला को मूल्य एक WPT मुख्य घटना शीर्षक?एन्थोनी Zinno छैन लाग्छ, त्यसैले प्रयास भन्दै एन्थोनी Zinno.उहाँले जिते बस छ आफ्नो तेस्रो WPT मुख्य घटना मा शीर्षक भन्दा कम 18-महिना पछि, विजय मा ला पोकर क्लासिक छ । एक विजय भनेर आए भन्दा कम एक दुइ हप्ता पछि हुनुको मा सफल Fallsview.उहाँले हुन्छ केवल तेस्रो खेलाडी तीन शीर्षक जीत – सँगसँगै Gus Hansen, र कार्लोस Mortensen – र मनपर्ने अर्को बन्न WPT खेलाडी को वर्ष स्लट जम्मा pulsa न्यूनतम 10rb बिना cutout. Zinno राख्यो अन्तिम तालिका समावेश माइक लेआ, क्रिस Klodnicki र इगोर Yaroshevsky लिन $1 पहिलो पुरस्कार । उहाँले अब छ भन्दा $2.8 m मा बाँच्न प्रतियोगिताको आय । अब के तपाईं कल एक हीटर.यो GPI युरोपेली पोकर पुरस्कार Nominees घोषणा गत हप्ता म दुःखी गेय बारेमा सफलता को inaugural विश्व पोकर सूचकांक (GPI) अमेरिकी पोकर सम्मेलन (APC) र अमेरिकी पोकर पुरस्कार (APA), र भन्दा कम मा एक fortnights समय, एलेक्स Dreyfus र आफ्नो दल को शुभ मानिसहरूलाई गरिरहेको हुनेछ यो सबै फेरि । नामांकन लागि 14 औं वार्षिक युरोपेली पोकर पुरस्कार घोषणा गरिएको छ, र यो डोमिनक Panka र Remko Rinkema छन् जो मा अभिनीत बढी विभाग भन्दा अरू कसैलाई. Panka लागि मनोनीत गरिएको छ प्रतियोगिताको प्रदर्शन को वर्ष, र Breakout खेलाडी को वर्ष स्लट जम्मा pulsa न्यूनतम 10rb. Rinkema लागि मान्यता छ, आफ्नो उत्कृष्ट काम मा PokerNews संग नामांकन मिडिया मा व्यक्ति को वर्ष, र मिडिया सामग्री को वर्ष विभाग । यो पुरस्कार समारोह पालन गर्नेछन् युरोपेली पोकर सम्मेलन । यो घोषणा को पुरस्कार थिएन कृपया सबैलाई । पूर्व EPA अनलाइन पोकर प्लेयर वर्ष विजेता, Andreas Torbergsen, थाहा चाहन्थे किन त्यहाँ थिएन एक श्रेणी awarding अनलाइन पोकर खेल्न । यो एक निष्पक्ष कुरा हो । एलेक्स Dreyfus प्रतिक्रिया केही संग वैध अंक आफ्नै को – को कमी, डाटा अलग खेलाडी पूल, खेलाडी गुमनाम – तर तिनीहरूले सहमत गर्न एक समझौता छ । 2016 GPI EPA गरेको केही फारम को पहिचान को लागि अनलाइन खेल्न । अर्को निशान मा सामाजिक मिडिया संचार बक्स छ । डोयले Brunson फिर्ता छ पोकर खेल एक हप्ता पछि क्यान्सर सर्जरी डोयले Brunson देखाइएको छ मान्छे को छ कि एक को हृदय सिंह तले कि नाजुक फ्रेम को आफ्नो । 10-समय WSOP च्याम्पियन गरेकोले आफ्नो 12 औं प्रमुख सर्जिकल सञ्चालन गर्दा उहाँले थियो एक melanoma हटाइएको आफ्नो टाउको । औंलाहरु थिए पार, प्रार्थना गरेका थिए, र Brunson संग देखा भन्दा बढी केही छेद को धेरै मा आफ्नो टाउको । हास्य आफ्नो अर्थमा थियो, प्रभावित छैन । "बाहिर पाइने यो ठूलो चीरा मा मेरो टाउको छ जहाँ वास्तविक बच्चा पोकर भुक्तानी Doc प्रयास गर्न र निकाल्न केही पोकर ज्ञान देखि मेरो टाउको।" उहाँले tweeted.पछि घरबार लागि एक हप्ता, Stetson was फिर्ता मा र Brunson थियो फिर्ता विजेता मा पैसा को टेबल.नवीनतम प्राप्त जुवा देखि समाचार केल्विन Ayre valise cabine pas cher geant क्यासिनो.
हार्ड रक क्यासिनो सिअक्ससिटी
स्लट जम्मा pulsa न्यूनतम 10 हजार
नयाँ स्लट मिसिन मा चोक्ट durant
कति स्लट मिसिन मा हार्ड रक ताम्पा
Valise एक भावनाहरु tres solide
नयाँ स्लट मिसिन मा क्यासिनो
सास को जंगली जुवा ढाँचा
Dq11 क्यासिनो टोकन सुन
क्यासिनो de la भ्याली रोम
सबै भन्दा राम्रो मुक्त पोकर अनुप्रयोग लागि मित्र
नयाँ स्लट मिसिन मा सुनको डला lake charles
हार्ड रक क्यासिनो sign in
स्लट जम्मा pulsa indosat बिना cutout
पार्किंग स्लट वा पार्किंग
पार्किंग स्लट मा दुबई मल
स्लट जम्मा pulsa न्यूनतम 10000
स्लट जम्मा pulsa न्यूनतम 10rb बिना cutout
स्लट जम्मा pulsa न्यूनतम 10rb
valise cabine pas cher geant क्यासिनो